मास्कको जोहो ! (फोटोफिचर) | Ratopati
मास्कको जोहो ! (फोटोफिचर)
मास्क किन्न मानिसहरु टिचिङमा लामबद्ध
personसुवास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeचैत ७, २०७६ chat_bubble_outline1
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरस महामारीको सन्त्रासबीच देश अर्ध–लकडाउनको स्थितिमा पुगेको छ । राजधानी काठमाडौँ बिस्तारै सुनसान बन्न थालेको छ । सरकारको आग्रहबीच मानिसहरु अत्यावश्यक कामबाहेक घरमै बस्न थालेका छन् । कोभिड–१९ को नाम दिइएको कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट सुरक्षाको उपायहरु अपनाउन शुरु गरेका छन् ।
यतिबेला मानिसहरुलाई सपिङमलदेखि पसलहरुमा स्यानिटाइजर, ट्वाइलेट पेपरदेखि अत्यावश्यक सामग्रीहरुको जोहो गरिरहेको देख्न सकिन्छ । कालोबजारीबीच बजारमा विशेष गरेर मास्कको अभाव देखिएको छ । संक्रमणबाट बच्नका लागि मास्क किन्नेहरुको लाइन यतिबेला मेडिकलहरुमा देख्न पाइन्छ । टिचिङ अस्पतालमा यतिबेला मास्क किन्नका लागि लामै लाइन देखिएको छ । हेरौँ केही तस्विरहरु :
March 21, 2020, 8:02 a.m. Ashesh
नलागेको रोग निम्त्याउन के मरिहत्ते हौ।